TTSweet: ဦးခြိမ့်၏ "ကျွန်တော်နှင့် ၁၀ ပုံရိပ်များ (၁) "
Posted by T T Sweet at 11:39 PM
ကိုဇော် February 15, 2011 at 5:49 AM
ကျနော်သာဆို . . .
“ ကျွန်တော် နှင့် ဘဝ ၁၀ ခု ပုံရိပ်များ ” လို့ ပေးမိမှာ။
အပေါ်မှာ အချီးလေး ပျိုးထားလို့ ရေးမိတာပါ။
မြူးမြူး February 15, 2011 at 10:30 AM
အခန်းဆက်တွေ မျှော်နေပါတယ်ဗျို့..း)
Longing for U Chaint's new post.It'saquite interesting post.
အောင်မော် February 15, 2011 at 1:31 PM
ဆရာမြသန်းတင့် ကတော့ အညတြ ရုပ်ပုံလွှာများဆိုပြီးရေးဘူးတယ်..
မထင်မရှား ဘ၀သ္မားတွေကို တွေ့ပြီးရေးထားတာ။
နောက်တော့ ဘ၀ အစုံတွေပါလာတော့ ခေတ်ပြိုင်ရုပ်ပုံလွှာများဆိုပြီးရေးပြန်တယ်။
ဦးခြိမ့်က ၁၀ ဆိုတာကို မသုံးဘဲနဲ့ တခြားခေါင်းစဉ်လေး စဉ်းစားပါလား...
အဲဒီ ၁၀ကြီးက limit ဖြစ်နေမယ်နော်..နောက်ထပ်ရေးစရာတွေကြုံခဲ့ရင်..
T T Sweet February 15, 2011 at 1:57 PM
ဦးခြိမ့်က ၁၀ ပုံရိပ်များဆိုတာ ကျွန်မထင်တာ ပြောရရင်ဖြင့် ၂၀၁၀ခုနှစ်မှာ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ပုံရိပ်များလို့ ဆိုလိုတယ်ထင်တာပဲနော်။
နောက် တစ်ခါသွားတော့ ဥပမာ ၂၀၁၁ ဆို ၁၁ ပုံရိပ်များ ပေါ့ဂျာ။
ဆရာမြသန်းတင့် ရေးတာတွေ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ရှူမ၀လား၊ ပေဖူးလွှာလား မမှတ်မိတော့ဘူး။
ဂျီးတော်၊ မြူးမြူး၊ အနောနိမတ်စ် လာအားပေးကြသူများ အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဦးခြိမ့်ရေးတာ အပိုင်း ၅ ရောက်ပြီ။ မဆွိတီလဲ အသစ်တင်ဖို့မအားလို့ ညတိုင်း တစ်ပို့စ်စီ ဆက်တိုက် တင်ပေးပါ့မယ်။
တောင်ငူသား February 15, 2011 at 5:04 PM
ဦးခြိမ့်လည်း မြန်မြန်ရေးပေးပါ။ တီတီဆွိလဲ မြန်မြန်တင်ပေးပါ။ တထိုင်တည်း ၁ကနေ ၁၀ထိ ဖတ်ရမယ်ထင်တာ။ အောက်ရောက်မှ...
တကယ်တမ်း ပြောရရင် အဲလို ကိုယ့်တစ်ဦးတည်းအတွက် မဟုတ်ဘဲနဲ့ မိသားစုတွေ တော်တော်များများရဲ့ စားဝတ်နေရေးကို ပြေလည်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းမျိုးတွေ လုပ်ချင်လှပါတယ်။ ကြိုးစားသလောက် အပင်ပန်းခံသလောက် သမာသမတ်ကျသလောက် နောက်ကနေ အကျိုးကျေးဇူးများတဲ့ အလုပ်မျိုးကို တနေ့တော့ အရောက်သွားနိုင်အောင် ကြိုးစားရပါဦးမယ်။
pandora February 15, 2011 at 11:58 PM
ကျူးပစ်ကို အရင်တုန်းက သွားဖတ်ဖြစ်တယ်။ နောက်တော့ ဖောင့်အဆင်မပြေတာရယ် အချိန်သိပ်မရတာရယ်ကြောင့် အဆက်ပြတ်သွားတယ်။ ဦးခြိမ့်ရဲ့ ပို့စ်တွေ ဆက်တင်ပါနော်။ ဘလော့ဂ်လင့်ခ်လည်း ပြန်ချိတ်ထားပါတယ်။